Saw blade & fingure umsiki ohlangene Factory - China Saw blade & fingure cutter joint Abakhiqizi, abahlinzeki
Ividiyo Yokusebenza Kwemikhiqizo
Izimboni eziyisicefe ezimbonini
I-carbide Hinge boring bits
Ngokusebenzisa imbobo ye-carbide drill
Carbide inzuzo amanani kanye Planner imimese
Carbide Imimese yokuphrinta
Imimese yeCarbide Planner
Imimese eguquguqukayo yeCarbide
I-Carbide Spur nemimese egaya izibozi
Imimese engenayo yeCarbide
Saw blade & fingure umsiki ohlangene
Carbide umunwe umsiki ngokuhlanganyela izinkuni
I-PCD saw blade ne-TCT saw blade
I-PCD yensimbi eyindilinga
TCT isiyingi blade
Amathuluzi we-HAN-C anolwazi lweminyaka eyi-10 ku-Design & nokukhiqiza okusha kuzokwenza ukusebenza kwakho ngokhuni kube lula kakhulu
Ukuqina kwe-carbide dowel ...
I-HW idonsa nge-3 cutt ...
PCD Ithebula Saw Blades
Umunwe umsiki ngokuhlanganyela ngoba bui ...
Amabhithi wesicefe we-TCT
4 Flutes ukusebenza okuphezulu t ...
4 imitshingo dowel zezimboni d ...
Umunwe umsiki ngokuhlanganyela wokwakha-160 × 60-4T
Amazinyo e-tungsten carbide, okomzimba ngu-65Mn, HRC40-42;
Ifanele ukucutshungulwa: izinkuni ezibolile, ukungcola, izipikili nokunye ukusika okuhle kokusebenza
TCT single rip saw blade for Solid Wood Cutting isiyingi blade isaha blade
Ukusikeka okukodwa kwe-TCT Saw Blade kungokokhuni oluqinile noma ukusika komphetho ngaphambi kokuhlangana. Izinga lekhwalithi ephezulu yokuqeda ukhuni oluthambile nezinkuni ezilukhuni. Yikuphi ukwakheka kwamazinyo okukhethekile okuvumela ukucishe ukuphela kommese wokusika, okulungele i-Edge trimmer, umshini wokusika osikiwe owodwa, isikhunta netafula etafuleni njll. Ukwehla okulandelayo noma ukugwedla kungancishiswa. Izinto zokwakhiwa kwangaphambilini nobuchwepheshe busekela impilo yokusika ende.
Isiyingi Esishaya amagoli Saw Blade ebhodini elihlanganisiwe
I-saw blade isetshenziselwa ukusika okukodwa nokunamathiselwe kwamapaneli we-plain ne-veneer (njenge-chipboard, MDF ne-HDF). Iphrofayili yezinyo elungiselelwe ithuthukisa ikhwalithi yokusika, ukuqina kunamandla, ikhanda lokusika livikela ukumelana kakhulu futhi ukusika kuzinzile.
Iphaneli ye-TCT Sizing Circular Saw Blades Yebhodi elaminishwe
Umsiki we-PCD lamello wezinkuni
Lo mshini unganikezwa ukuthi angene emshinini omncane ophethwe ngesandla kaLamello futhi angabekwa endaweni lapho kuzosetshenziswa khona umshini we-CNC. Inconyelwe ukukhonona kwekhonji kanye namajoyinti we-longitudinal kuma-hardwoods, i-MDF ene-veneered kanye ne-laminated nge-P system anchorage.
Ama-PCD Saw Blades enziwe ngezinto ze-PCD nensimbi yensimbi, ngokusebenzisa ukusika kwe-laser, ukubopha, ukugaya nezinye izinqubo zokukhiqiza. Zisetshenziselwa ukusika ukumboza phansi kwe-laminate, ibhodi yesiphetho esiphakathi, ibhodi lesifunda kagesi, ibhodi lokuvimbela umlilo, i-plywood nezinye izinto.
Imishini: Ithebula isaha, ugongolo isaha njll